Baidoa Media Center » ”Gudoomiyaha maxkamada ciidamada khalabka sida waxa uu wakiishay gudoomiyaha gobolka” Shiine Macallin Nuurow.
”Gudoomiyaha maxkamada ciidamada khalabka sida waxa uu wakiishay gudoomiyaha gobolka” Shiine Macallin Nuurow.
July 7, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Gudoomiye kuxigeenka gobolka Bay ee dowlada KMG Soomaaliya Shiine Macalin Nuurow ayaa ka warbixiyay xaalada guud ee gobolka Bay.
Shiine ayaa waxa uu sheegay inay ciidamada dowlada KMG Soomaaliya ee gobolka Bay gacanta ku hayaan sadex degmo oo gobolka kamid ah gaar ahaan degmooyinka Baydhabo, Berdaale iyo Qansaxdheere oo uu gudoomiye kuxigeenku sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmooyinkaas.
Isaga oo ka hadlayay arimaha maxaabiis Shabaab ah oo ay soo qab qabteen, gudoomiye kuxigeenka gobolka Bay Shiine Macalin Nuurow waxa uu sheegay in gudoomiyaha maxkamada ciidamada khalabka sida ee dowlada KMG Soomaaliya u wakiishay gudoomiyaha gobolka Bay arinta maxkamadeynta dagaalyahanada Alshabaab.
” Fadhiyo maxkamadeed oo uu goobjoog ka ahaa wasiir kuxigeenka iyo sidoo kale ay ku sugnaayeen xildhibaanada gobolka ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo, dhowr iyo sodon qofood waa la xukuma ilaa iyo sideetameeyana waa lasii daayay” sidaas waxaa yiri gudoomiye kuxigeenka gobolka Bay ee dowlada KMG Soomaaliya, Shiine Macalin Nuurow.